GitHub Yakaburitswa Nyowani Zvimiro, Enterprise Sponsors, uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
GitHub yakaburitsa akati wandei maficha uye zvigadzirwa kumusangano wavo weGitHub Universe 2020 musangano wekuvandudza uye Izvo zvinonyanya kucherechedzwa kubatanidzwa kwe "Sponsors for Makambani", iyo inowedzera kugona kutsigira yakavhurwa sosi mapurojekiti kubva kune vanhu, avo vanogona kutsigira yakavhurika sosi vanogadzira kubva gore rapfuura, kune mabhizinesi.
Idzo mari dzekudyara dzinoramba dzichikura nekukurumidza, nevamwe vanogadzira izvozvi vachiwana anosvika matanhatu manhamba kubva kuGitHub backers.
Mamwe makambani akatosaina vanotsigira anosanganisira American Express, Amazon Web Services Inc., Daimler AG, Stripe Inc., Microsoft Corp., uye New Relic Inc.
"KuNew Relic, vagadziri vari pamoyo wezvese zvatinoita, uye izvi zvinosanganisira kuisa mari mukukura kwenharaunda inobudirira yakavhurika," akadaro Jonan Scheffler, director wezvekudyidzana hukama kuNew Relic. "Yedu yakavhurwa sosi yekuona inoenderana zvakanaka neGitHub modhi yekugadzira yakasimba yakavhurika sosi nharaunda kune vanogadzira."
Imwe nzira nyowani iyo yakavhurwa, yaive iyo itsva mabasa kubva kuGitHub, iyo vanogadzira vanozowana yavo yezuva nezuva chiitiko chakagadziridzwa nezvimwe zvinhu zvitsva, kusanganisira rima modhi, otomatiki kusangana pane zvekudhonza zvikumbiro, hurukuro, uye kutsamira kudzokorora.
Zvinoenderana neGitHub, "Rima Dhizaini" yagara iri yekukumbirwa yekuvandudza UI uye yango rova ​​beta uye ichave inobatsira mukuchengetedza maziso evazhinji vanogadzira avo vanofarira kushanda munzvimbo dzakaderera mwenje kana vasingangode kupenya kwemuchena mutsvuku.
Kugadzira chikumbiro chekudhonza kunogona kunetsa nekuti zvinoda kuongororwa kwakawanda usati wasanganisa nebazi hombe rekodhi, izvo zvinotora nguva uye yakawanda yekutarisa. Ndo izvo zvakagadzirirwa kubatsira kugadzirisa otomatiki kubatanidza chimiro mune zvekudhonza zvikumbiro, nekutarisa mamiriro ekudzokorora emajoin mukudhonza kuitira kuti vagadziri vafambe kuenda nekukurumidza.
Nhaurirano dzinopa yakatsaurwa nzvimbo yevagadziri ku Taura, bvunza uye pindura mibvunzo uye ita hurukuro dzakajeka Inogona kusungirirwa kune chinyorwa uye inopa nzira yekurapa uye kuchengetedza nyaya dzine chekuita nehurukuro tambo.
"Mushure mekushandisa GitHub Kukurukurirana kwevhiki, takafunga kuendesa iyo ImageMagick foramu Kukurukurirana," Dirk Lemstra, ImageMagick muchengeti. “Chikwata chedu chikuru chinogamuchira mibvunzo inosvika mishanu kubva kunharaunda yedu zuva rega rega uye pamberi peMakurukure, vanhu vanga vachisimudza nyaya, vachititumira tsamba, kana kubvunza mibvunzo mumusangano wedu wePHP. Iko kusanganisa kwakatisiya isu neisararo seti yezaziso. Nhaurirano dzakandichengetera nguva nekuti ikozvino, inongova inbox, uye ndiyo yakava yangu GitHub yekuzivisa inbox.
GitHub yakazivisawo kuburitswa kweshanduro 3.0 ye Enterprise Server iine bevy yezvinhu zvitsva zvinotangisa nazvo muna Zvita 16. Aya maficha anosanganisira zviito zvichagadzirisa mashandiro ebasa rekuenderera nekutumirwa nekubatanidzwa, bundling, kodhi kuongorora, nharembozha beta rutsigiro, uye zvakavanzika beta kuongorora
Nezviito zveGitHub,s vagadziri vanogona mepu workflows vachishandisa visualization, Teedzera kufambira mberi mune chaiyo nguva, zvichiita kuti zvive nyore kuona dzakaomarara workflows uye nekutaurirana chinzvimbo nevamwe vese timu.
Iye muoni anototaridza metadata yekufambisa uye obatanidza akananga kune kodhi yekodhi uye kuendesa ma URL, zvichiita kuti zvive nyore kunetsa kumhanya kana chimwe chinhu chikatadza.
Izvo zvinotaurwa zvakare kuti Enterprise Server vatengi vanogona ikozvino zvakare kugadzirisa emhando yepamusoro chengetedzo, kusanganisira kutarisisa kodhi uye zvakavanzika mukufambiswa kwebasa sechikamu chekutumirwa kweseva.
GitHub inoronga kugadzirisa Zviito gare gare mwedzi uno nenzvimbo dzakachengetedzwa uye vaongorori vanodikanwa, mu beta, yezvakachengetedzwa zvakavanzika paGitHub Enterprise Cloud uye zvese zvinyorwa zveveruzhinji paGitHub.com. Pamusoro pezvo, kuona kwebasa rekufambisa, kuendesa, uye matanda ekuendesa anoenda kuruzhinji beta kune wese munhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GitHub Yakafukunurwa Zvitsva Zvitsva, Enterprise Sponsors, uye Zvimwe